रामप्रसाद सिटौला (फलित ज्योतिष), आश्विन २६, २०७५
अध्ययन–अध्यापनमा प्रगति हुनेछ । सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्दा आफ्नो पहिचान फराकिलो होला । व्यापार–व्यवसायबाट अपेक्षाभन्दा बढी लाभ मिल्नेछ । प्रेमी–प्रेमीकाबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुनेछ । आम्दानीका थप स्रोत फेला पर्न सक्छन् । सहकर्मीहरूसँगको वैचारिक मतभिन्नतामा आफन्तहरूले सहयोग गर्नेछन् । पुरा पढ्नुहोस्
त्यस्तै वस्तुबाहेकका बोलीचालीमा समेत अंग्रेजीले स्थान पाउन थाल्यो । कसैले गूड मर्निङ छोडेर शुभ प्रभात भनेको मैले सुनेको छैन, गुड इभिनिङको सट्टा शुभ सन्ध्या पनि भनेको सुनिएको छैन । नमस्तेको सट्टा अहिले हेलो र हाई नै बढी हिट छन् । तिम्रो उडान कति बजे अनि उडानविश्राम कहाँ हो भनेर सोध्यो भने पक्कै दोहोर्‍याएर सोध्नैपर्छ, ‘तिम्रो फ्लाइट कति बजे अनि ट्रान्जिट कहाँ हो ?’ पुरा पढ्नुहोस्
राजाराम पौडेल, आश्विन २६, २०७५
अहिले पीपीएलका लागि मैदान सहित पिच निर्माण भैरहेको छ । सबै टिमले आफ्नो मार्कर्ी खेलाडीमा राष्ट्रिय टिमका बहुचर्चित सदस्यलाई नियुक्त गरेका छन् भने अक्सन मार्फत ६९ खेलाडी छानिएका छन् । दुई सातामा दर्ता भएका १ सय ७८ खेलाडीबीच उक्त अक्सन सम्पन्न गरिएको थियो । पीपीएलका लागि एउटा टिमले न्यूनतम १५ खेलाडी तथा अधिकतम १८ खेलाडी आबद्ध गर्ने प्रावधान छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , आश्विन २६, २०७५
बलिउडका स्थापित अभिनेता गोविन्दा लामो समयपछि चलचित्रमा देखा पर्दैछन् । कुनै बेला सबैभन्दा धेरै हिट चलचित्र दिने अभिनेतामा गोविन्दाकै नाम आउँथ्यो । पछिल्ला केही वर्षयता भने उनी कमै चलचित्रमा देखिएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत पुगेकी एउटी सोझी गरिब महिलाको कथामा आधारित यो नाटकमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली महिलाहरूले भोग्ने यथार्थलाई समेटिएको छ । करिब एक घन्टा लामो नाटकमा वैदेशिक रोजगारीले समाजमा निम्त्याएका विभिन्न विसंगतिको समेत चित्रण गरिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
सन् १९७० को दशकमा नारायणगोपालले दार्जीलिङ पुगी दिलमाया खातिसँग भेटेरै यो गीत गाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि कोलकतामा नारायण गोपाल र दिलमाया खातिको स्वरमा रेकर्ड गरिएको यो गीत रेडियो नेपालमा सबैभन्दा बढी बज्ने दर्सैंको गीतमध्ये एक हो । पुरा पढ्नुहोस्
एकातिर कपडा सिलाउने काम चलिरहन्थ्यो, अर्कातिर घर लिपपोत गरेर चिटिक्क बनाइन्थ्यो । ओढ्ने–ओछ्याउने सिरक–डसना घाममा सुकाउने काम पनि हुन्थ्यो । घर वरपर ढकमक्क फूल फुलेर दसैं आएको आभास दिन्थे । वरपरका दाजुभाइहरू मिलेर रोटेपिङ, लिङ्गेपिङ लगाउँथे । हजुरआमाले भक्तपुरबाट भरियाहरूलाई बोकाएर दसैंको सामान ल्याउनुहुन्थ्यो । पुरा पढ्नुहोस्
रेडियो कान्तिपुरले दसैंको अवसर पारेर प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको रमाइलो कार्यक्रम चंगा चेट पर्सि आइतबार अर्थात् असोज २८ गतेका दिन आयोजित गर्दैछ । दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म कान्तिपुर रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने उक्त कार्यक्रममा लोकप्रिय गायक–गायिकाहरू प्रस्तुत हुँदैछन् । पुरा पढ्नुहोस्
दसैं आयो, खाउँला पिउँला, यसपालिको दसैंमा स्याउ फोन किनौंला...पैसा सैसा केही छैन, सपना हजार । सबै कुरा पुर्‍याइदिने सपनीको बजार । पुरा पढ्नुहोस्
सिंगो देशले प्रश्न उठाएको छ, तैपनि हत्यारा पत्ता लाग्दैन (यात्रा सन्दर्भ : यस्तै हो भने पूरै देश तात्नेछ) । बोल्न नसक्ने, आवाज उठाउन नसक्नेहरूको अवस्था कस्तो होला ? कानुन कमजोर र निर्धाहरूका लागि मात्र हो कि ? दोषीलाई किन कानुनको दायरामा ल्याइँदैन ? पुरा पढ्नुहोस्